असाड १७, २०७५
अरबौं अरब रुपियाँको चामल आयातगरेर जीवन धान्न वाध्य वनेको नेपालजस्तो ‘कृषि प्रधान’ देशका किसानहरुले दही–च्यूरा खाएर असार पन्ध्रको धान दिवस मनाए । विगतमा जस्तो, यो पटक कुनै मन्त्री रोपारहरुसंग हिलो खेलेर प्यार–मोहव्वत जाहेरगर्न खेतमा पुगेको समाचार सुनिएन । किसानका खेतमा धानको उत्पादन घटेपनि सरकारले धान खेतीका लागि आवश्यकपर्ने मल, विउ र अन्य आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिमा कमा, पूmलस्टप वा पूर्ण विराम केही सघाएन । किसान सँधै मल विउको हाहाकारमा फँस्यो । सरकार नालायक भएकोले विचौलिया र तस्करहरुले फाइदा उठाए । कृषक जगतप्रति सरकारको यो अवमानना नयाँ होइन । मधेश, पहाड सवैतिर हाम्रो देशको स्थिति नै यस्तै छ । असार १५ मा धान दिवसको गीत गायो । त्यसपछि रोपाईं सकियो । मानो छरेर मुरी भित्य्राउने यो चलन पनि अव धूमिल वनी सकेको छ ।
अहिलेको वामपन्थी सरकारले आफनो मुहार चित्रसम्म पनि कोर्न सकेको छैन वा कोर्न चाहेको छैन । सरकारको एउटै मुहार छ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । उनले जे भन्छन, त्यही हुन्छ सरकारको निर्णय । देशमा असंख्य समस्या छन । ३३ किलो सुन कसले कहाँबाट ल्यायो ? सरकारले अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन । रामबहादुर थापा वादलजस्ता ‘सुयोग्य’ व्यक्ति गृहमन्त्री भएको वेलामा सुन तस्करीका सवै गौंडा टालिएलान भन्ने कसैले सोचेको थियो भने त्यो सोचाइ गलत थियो । ३३ किलो सुनको टुंगो लगाउन त गृहमन्त्री वादललाई यति हम्मेहम्मे परेको छ भने सुन तस्करीको गौंडा टाल्ने काम कहाँबाट हुन्छ उनीबाट ?
ओली नेतृत्वको वर्तमान संघीय सरकार ख्यालख्यालमा चलेको देखिन्छ । प्रम ओली आफनै जीवनकालमा नेपालका नदी नालामा पानी जहाज चलाउने, भारत र चीन दुवैतिरबाट रेल ल्याएर देशलाई समृध्दिको बाटोमा अघि वढाउन चाही रहेका छन । अरु कुरा भर्सेलै परोस । जहाज र रेलको बाटो खुली सकेपछि नेपाल ‘ओपन’ हुन्छ । त्यसपछि त समृध्दि नै समृध्दि । खातका खात समृध्दि । संघीय सरकारको काम गराइलाई हेर्दा सरकार आफैं कुवाको व्याङ जस्तो देखिन्छ । प्रम ओलीले वच्चामा देखेका सपनाजति आपूm सरकारमा रहेका वेला साकार पारी हालौं भन्ने लालशा राखेको देखिन्छ । देशभक्तिको मूल बाटोमा लम्किएका व्यक्तिले लालशा राख्नु राम्रो कुरा हो । समृध्दिका सपना नदेखेसम्म देश अगाडि वढदैन । वढ्यो भने दुर्घटना हुन्छ ।
तर, समस्या के छ भने हाम्रो देशको अवस्था निरन्तर रुपले अस्थीर रहेको छ ।विगत एक दशकभन्दा लामो संक्रमणकाल र त्यसका समानान्तर उठेका विषयहरुले स्थीर राजनीतिको सट्टा अस्थीरतालाई नै वढाएको छ । मानिसहरु संक्रमणकालका वारे त्यति खुलेर वोल्न चाहँदैनन । किनभने सरकारको चरित्र संदिग्ध छ । एउटा सानो खेल तमाशामा पनि मानिसको मृत्यु हुन्छ । त्यो मृत्युले सरकारका अधिकारीहरुलाई संवेदनशील वनाउँदैन । अहिलेको संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पश्चिममा जनताको ठूलो आन्दोलन उठ्यो । जनता आपूmलाई समेटेर वनोस भन्ने चाहन्थे । सरकार दमनमा ओर्लियो । आन्दोलनकारी र पुलिसका वीचको मूठभेडमा दुवैथरि मारिए । तर, मरेका पुलिसका पक्षमा सरकार अडियो । त्यही आन्दोलनबाट आएका टिकापुरका संचारकर्मी रेशम चौधरी चुनावमा उठे । उनको जीत निश्चित थियो । तर, अहिलेसम्म उनले संसदको शपथ लिन पाएका छैनन । कैलाली घटनापछि सरकारी दमनबाट जोगिन भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा सयौं नेपाली थारुहरु निर्वासित भए । सरकारले त्यसको अहिलेसम्म मतलव नै राखेको देखिदैन । ओली सरकार टिकापुर विवादलाई साम्यपार्न चाहन्छ भने आन्दोलनकारीले इज्जत र स्वतन्त्रताका साथ आफनो घरमा वस्न पाउने वातावरण वनाउनु पर्दछ । तर, सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई अनावश्यक पुल्पुल्याएको छ । जनताको सुरक्षाका लागि खटिएका पुलिसकर्मी पहाडिया र मधेशीमा वाँडिन्छन र झगडा गर्दछन । मत्स्य न्याय भनेको यही हुनु पर्दछ ।
भर्खरै सम्पन्न चुनावपछि देश संघीयतामा प्रवेश गरेपनि अहिलेसम्म प्रदेशहरुको स्वायत्त शासकीय संचालनमा वाधा र अवरोध हटेका छैनन । प्रदेशका प्रमुखहरुले प्रदेश सभालाई संवोधन गरी सके । प्रदेश सरकारले आफनो वजेट पारित गरी सके । अव काम कसरी अघि वढछ ? कसैलाई थाह छैन । अहिले देशका ७ वटा प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशमा प्रादेशिक शासन होइन, अप्रत्यक्ष रुपमा केन्द्रीय सरकारको हुकुमत हावी छ । प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयात्मक कामको व्याख्या गरिएको छैन । सरकारले कुनैदिन प्रदेश सभा र प्रादेशिक सरकार विनाको संघीय व्यवस्था चलाउने हो ? यसै भन्न सकिदैन । अहिले वामपन्थीहरुको सरकार छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा संगठित नहुँदासम्म माओवादीले संघीयताको अडान राखेको थियो । अव पार्टीको विलय पछि उसको त्यो अडान पनि विलायो होला ।
सवै नेपालीका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिलाउने र स्वास्थ्यमा सवै नेपालीको पहूँच वढाउने उद्देश्यका साथ डा. गोविन्द केसी जुम्ला पुगेका छन अनसनगर्न । उनी आफनो मिसनमा कति सफल होलान ? आजसम्म उनको अनसनको परिणाम हेरेर वसेका हामी सवैलाई थाहै छ । सरकार पनि दादागिरिजस्तो संचालन हुन थाल्यो भने निश्चयपनि देश समृध्द हुन सक्दैन । हालको समयमा देशको समृध्दि केलाउन थाल्यो भने चरम निराशा हात पर्दछ । नेपाली जनता अचाक्ली गरिवीको मारमा परेपनि गुनासो गर्दैन । यो गुण हो नेपाली जनताको । नेपाली जनता सहज र सरल छन भन्दैमा उनीहरुलाई सरकारले न्याक्नु कुनैपनि हालतमा उचित होइन । केन्द्रीय सरकारमा वा तिनका वरपर वस्ने मात्र देशभक्त हुने हो भने लोकतान्त्रिक राज्यको परिभाषा नै वदलि दिए हुन्छ ।
अहिलेको सरकारका वारे प्रचार–प्रसारलाई हेरौं । सरकार दूधको गंगा वहाउन तयार भएको देखिन्छ । संघीय सरकारको दृष्टि नयाँ नयाँ आविष्कारमा केन्द्रीत छ । नयाँ बाटो, नयाँ एयरपोर्ट, नयाँ शहरहरु र नयाँ गन्तव्यमा रमाएको छ केन्द्रीय सरकार । यता प्रादेशिक सरकारहरु झिंगा धपाएर वसेका छन । प्रदेशसंग समृध्दि ल्याउने पैसा पनि छैन । सरकार टिकाउने घरको टेको पनि छैन । केन्द्रीय सरकारले सक्रियतापूर्वक केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका वीच समन्वय नल्याउने हो भने देश असफल हुन्छ । यो सन्दर्भमा प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई झापट दिनु पर्दछ । देश लोकतान्त्रिक विधिबाट चल्नु पर्दछ । यसमा खलनायकी वर्जित छ ।